ⓘ ကရီနာ ကပူး (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်)
3. ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဘဝအစ
၂၀⁠၀၁ ခုနှစ်တွင် Kabhi Khushi Kabhie Gham ဇာတ်ကားသည် အိန္ဒိယ၏ ဝင်ေငွအကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်သကဲ့သို့ သူ့အတွက်လည်း ပြည်ပ ဈေးကွက်တွင် စီးပွားရေးအရ အအောင်မြင်ဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်မှာပင် အိန္ဒိယသမိုင်းတွင် အလွန်ထင်ရှားသော ဧကရာဇ်တစ်ပါး ဖြစ်သည့် အာသောကမင်းအကြောင်း ရိုက်ကူးထားသော အာသောကဇာတ်ကား Asoka တွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယင်းဇာတ်ကားတွင် အာသောကအဖြစ် ရှရွတ်ခန်းက သရုပ်ဆောင်ပြီး ကရီနာကပူးက ကလိင်္ဂတိုင်း သူ မင်းသမီးတစ်ပါးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀ဝ၈ခုနှစ်တွင် ယရ့်ရရှ့်ဖလင် နှင့် ဝေါ့လ်ဒစ္စနေးရုပ်ရှင်တို့ ပူးပေါင်းထုတ် လုပ် သည့် ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သော လမ်းနံဘေးက ရိုမီယို Roadside Romeo အမည်ရှိ ဇာတ်ကားတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဆာအိဖ့် အလီခန်းနှင့်အတူ အသံ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
4. ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ
Wikipedia: ကရီနာ ကပူး (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်)